प्रोभेन्समा यो अद्भुत ताल गर्मी पौंडी र जाडोको लागि उत्तम छ, साथ ही एक पैदल यात्रा स्वर्ग. छन् 1500 माथिकाबाट यस यूरोपीय आश्चर्यको प्रशंसा गर्न चाहने उत्साहित पर्वतारोहीहरूको लागि ट्रेल्स. त्यसैले, तपाईं छनौट यदि तपाईं केवल सूर्यमा नुहाउन चाहन्छु डु on्गामा, वा खुट्टामा पत्ता लगाउनुहोस्.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यी प्राकृतिक चमत्कारहरूको कुनै पनि ट्रेनमा कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपको Best उत्तम प्राकृतिक आश्चर्य" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-n Natural-wonders-europe/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)